သငျကိုယျတိုငျ ပွုလုပျထားတဲ့ သနျ့စငျသော သဘာဝ မကျြနှာသနျ့စငျ ဂယျြလျ( Rose Water Cleansing Gel)နဲ့ သငျ့အလှကို ထိနျးသိမျးပါ။ -
နတေ့ဈနတေ့ာရဲ့ မနကျခငျးနဲ့ နလေ့ယျခငျးတှမှော ရုံးသှားတာဖွဈဖွဈ အလုပျသှားတာဖွဈဖွဈ ပှဲလမျးရှိလို့အပွငျထှကျတာမြိုးဖွဈဖွဈ အပွငျထှကျဖို့ ကိစ်စတဈခုခု ရှိနတေယျဆိုရငျ ပြိုပြိုမတေို့ရဲ့မလုပျမဖွဈ လုပျလရှေိ့တဲ့ အလုပျတဈခုကတော့ မိတျကပျလိမျး အလှပွုပွငျခွငျးပါပဲ။
ဒီလို မိတျကပျလိမျးပွီး အပွငျကိစ်စတှေ သှားလာပွီးရငျ အိမျပွနျရောကျတဲ့ အခါမှာ မဖွဈမနလေုပျသငျ့တဲ့ အလုပျကတော့ ညအိပျရာမဝငျခငျ လိမျးထားတဲ့ မိတျကပျတှကေို ပွနျဖကျြဖို့ပါပဲ။
ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့ ညအိပျယာဝငျတဲ့အခါ မိတျကပျတှကေို မဖကျြမိဘူးဆိုရငျ ခြှေးပေါကျတှထေဲ အညဈအကွေးတှေ ပိတျဆို့ပွီး ဝကျခွံ ထှကျလှယျတာမြိုးစတဲ့ အရပွေား ပွဿနာတှမြေားစှာ ဖွဈလာနိုငျလို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
သငျ မိတျကပျဖကျြတဲ့ အခါမှာ သဘာဝအတိုငျး မိမိကိုယျတိုငျပွု လုပျထားတဲ့ cleanserလေးနဲ့ ဖကျြမယျဆိုရငျ ဓာတုဆေးဝါးအန်တရာယျ ကငျးဝေးစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ ကိုယျတိုငျ ပွုလို့လို့ရနိုငျတဲ့ Rose Water Cleansing Gel လေးကို ပွုလုပျကွညျ့ကွပါစို့။
အရငျဆုံး ဖျောစပျဖို့ လိုအပျတာတှေ ကတော့…
နှငျးဆီပှငျ့ဖတျရညျ ခှကျတဈခှကျရဲ့ လေးပုံ တဈပုံစာ။
ရှားဇောငျးလကျပတျအနှဈ ထမငျးစားဇှနျး တဈဇှနျး။
ဂလဈဆရငျး ထမငျးစားဇှနျး တဈဝကျ
Castile soap ထမငျးစားဇှနျး လေးပုံ တဈပုံစာ။ (စူပါမားကကျမြားတှငျ ရနိုငျပါသညျ)
Rose Essential Oil အစကျ အနညျးငယျခနျ့။
ပွုလုပျနညျး. … ဦးစှာ သနျ့စငျသော ပနျးကနျလုံး တဈလုံးထဲကို နှငျးဆီပှငျ့ဖတျရညျ ထညျ့ပါ။ နောကျပွီးရငျ ရှားဇောငျးလကျပတျအနှဈ ပေါငျးထညျ့ပါ။ ပွီးရငျ Castile Soap ကို ပါဝငျ အခြိုးအဆအတိုငျး ထညျ့ပါ။
အဲ့သညျအထဲကို ဂလဈစရငျးထညျ့ပွီး မှပေေးပါ။ နောကျဆုံးမှ Rose Essential Oil အစကျအနညျးငယျခနျ့ကို ထညျ့ပွီး သမအောငျ မှပေါ။ မှတေဲ့အခါမှာ အမွှုပျမြားမထဖို့ သတိထားပါ။
ပွီးတဲ့အခါ ပုလငျးတဈလုံးထဲ ထညျ့ပွီး သိမျးလိုကျပါ။ ခွောကျသှအေ့ေးစကျတဲ့ နရောမှာ သိမျးမယျဆိုရငျတော့ ၇ရကျ ကြျောထားခံပါတယျ။ ရခေဲသတ်ေတာထဲမှာ သိမျးထားမယျ ဆိုရငျတော့ ဆယျရကျနဲ့ အထကျ အထားခံမှာ ဖွဈပါတယျ။
အသုံးပွုနညျး….. Cotton pad မှာ အဲ့ဒီ့gelကို အနညျးငယျဆှတျပါ။ ပွီးရငျအဲ့ဒီ့ cotton pad နဲ့ သငျ့မကျြနှာပျေါက မိတျကပျ အညဈအကွေးနဲ့ အဆီမြားကို ဖယျရှားပဈလိုကျပါ။ ရနှေေးနှေးနဲ့ မကျြနှာသဈလိုကျပါ။
မကျြနှာကို ခွောကျသှအေ့ောငျ သုတျပွီး အစိုဓာတျထိနျး ခရငျမျအပြော့စားကို လိမျးလိုကျပွီး အိပျစကျလိုကျပါ။ သငျကိုယျတိုငျ ပွုလုပျထားတဲ့ သနျ့စငျသော သဘာဝ မကျြနှာသနျ့စငျ ဂယျြလျနဲ့ သငျ့အလှကို ကွှရှစလေိုကျပါ။
သင်ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ထားတဲ့ သန့်စင်သော သဘာဝ မျက်နှာသန့်စင် ဂျယ်လ်( Rose Water Cleansing Gel)နဲ့ သင့်အလှကို ထိန်းသိမ်းပါ။
နေ့တစ်နေ့တာရဲ့ မနက်ခင်းနဲ့ နေ့လယ်ခင်းတွေမှာ ရုံးသွားတာဖြစ်ဖြစ် အလုပ်သွားတာဖြစ်ဖြစ် ပွဲလမ်းရှိလို့အပြင်ထွက်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ် အပြင်ထွက်ဖို့ ကိစ္စတစ်ခုခု ရှိနေတယ်ဆိုရင် ပျိုပျိုမေတို့ရဲ့မလုပ်မဖြစ် လုပ်လေ့ရှိတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကတော့ မိတ်ကပ်လိမ်း အလှပြုပြင်ခြင်းပါပဲ။
ဒီလို မိတ်ကပ်လိမ်းပြီး အပြင်ကိစ္စတွေ သွားလာပြီးရင် အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ အခါမှာ မဖြစ်မနေလုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်ကတော့ ညအိပ်ရာမဝင်ခင် လိမ်းထားတဲ့ မိတ်ကပ်တွေကို ပြန်ဖျက်ဖို့ပါပဲ။
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ညအိပ်ယာဝင်တဲ့အခါ မိတ်ကပ်တွေကို မဖျက်မိဘူးဆိုရင် ချွေးပေါက်တွေထဲ အညစ်အကြေးတွေ ပိတ်ဆို့ပြီး ဝက်ခြံ ထွက်လွယ်တာမျိုးစတဲ့ အရေပြား ပြဿနာတွေများစွာ ဖြစ်လာနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သင် မိတ်ကပ်ဖျက်တဲ့ အခါမှာ သဘာဝအတိုင်း မိမိကိုယ်တိုင်ပြု လုပ်ထားတဲ့ cleanserလေးနဲ့ ဖျက်မယ်ဆိုရင် ဓာတုဆေးဝါးအန္တရာယ် ကင်းဝေးစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ်တိုင် ပြုလို့လို့ရနိုင်တဲ့ Rose Water Cleansing Gel လေးကို ပြုလုပ်ကြည့်ကြပါစို့။
အရင်ဆုံး ဖော်စပ်ဖို့ လိုအပ်တာတွေ ကတော့…
နှင်းဆီပွင့်ဖတ်ရည် ခွက်တစ်ခွက်ရဲ့ လေးပုံ တစ်ပုံစာ။
ရှားဇောင်းလက်ပတ်အနှစ် ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း။
ဂလစ်ဆရင်း ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဝက်
Castile soap ထမင်းစားဇွန်း လေးပုံ တစ်ပုံစာ။ (စူပါမားကက်များတွင် ရနိုင်ပါသည်)
Rose Essential Oil အစက် အနည်းငယ်ခန့်။
ပြုလုပ်နည်း. … ဦးစွာ သန့်စင်သော ပန်းကန်လုံး တစ်လုံးထဲကို နှင်းဆီပွင့်ဖတ်ရည် ထည့်ပါ။ နောက်ပြီးရင် ရှားဇောင်းလက်ပတ်အနှစ် ပေါင်းထည့်ပါ။ ပြီးရင် Castile Soap ကို ပါဝင် အချိုးအဆအတိုင်း ထည့်ပါ။
အဲ့သည်အထဲကို ဂလစ်စရင်းထည့်ပြီး မွှေပေးပါ။ နောက်ဆုံးမှ Rose Essential Oil အစက်အနည်းငယ်ခန့်ကို ထည့်ပြီး သမအောင် မွှေပါ။ မွှေတဲ့အခါမှာ အမြှုပ်များမထဖို့ သတိထားပါ။
ပြီးတဲ့အခါ ပုလင်းတစ်လုံးထဲ ထည့်ပြီး သိမ်းလိုက်ပါ။ ခြောက်သွေ့အေးစက်တဲ့ နေရာမှာ သိမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ ၇ရက် ကျော်ထားခံပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ သိမ်းထားမယ် ဆိုရင်တော့ ဆယ်ရက်နဲ့ အထက် အထားခံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုနည်း….. Cotton pad မှာ အဲ့ဒီ့gelကို အနည်းငယ်ဆွတ်ပါ။ ပြီးရင်အဲ့ဒီ့ cotton pad နဲ့ သင့်မျက်နှာပေါ်က မိတ်ကပ် အညစ်အကြေးနဲ့ အဆီများကို ဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပါ။ ရေနွေးနွေးနဲ့ မျက်နှာသစ်လိုက်ပါ။
မျက်နှာကို ခြောက်သွေ့အောင် သုတ်ပြီး အစိုဓာတ်ထိန်း ခရင်မ်အပျော့စားကို လိမ်းလိုက်ပြီး အိပ်စက်လိုက်ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ထားတဲ့ သန့်စင်သော သဘာဝ မျက်နှာသန့်စင် ဂျယ်လ်နဲ့ သင့်အလှကို ကြွရွစေလိုက်ပါ။
Total Hits : 452201